ဘာ CSRSS.EXE လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး PROCESSOR ကိုပို့ဆောင်ထားမည် - WINDOWS ကို - 2019
ဘာ csrss.exe လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး Processor ကိုပို့ဆောင်ထားမည်
Windows ကို Task Manager ကို 10, 8 နဲ့ Windows7မှာဖြစ်စဉ်များ running ၏လေ့လာမှုမှာ, သင်ကတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်ပျက်တဲ့ Processor, သို့ပို့ဆောင်ထားမည်အထူးသဖြင့်လျှင်အဘယ်တစ်ဦး csrss.exe process ကို (client-server ကိုဗားရှင်းဖြစ်စဉ်ကို) အံ့သြလိမ့်မည်။
csrss.exe Window များပေါ်တွင်ဖြစ်စဉ်ကြောင်းဤဆောင်းပါးတွင်အသေးစိတ်ကအဘယ်အရာကိုကဖြစ်စဉ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်ထိုသို့အကြောင်းပြချက်ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်လက်ပ်တော့ရဲ့ Processor ကိုအပေါ် strain ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
client-server ကိုစွမ်းဆောင်ရည် csrss.exe ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကဘာလဲ
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ csrss.exe process ကို Windows ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်တစ်, နှစ်, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များ၏တစ်ခါတစ်ရံထက်ပိုအပြေးအဆိုပါ Task Manager ကိုအတွက်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
conhost.exe နှင့်အခြားအရေးပါသည့်စနစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ - Windows7ဒီဖြစ်စဉ်ကို Windows 8 နှင့် 10 (က command line ကနေကွပ်မျက်ခံရ) က cantilever အစီအစဉ်အတွက်ပိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ထပ်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်၏ပစ်လွှတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုစနစ်က startup ကာလအတွင်းအလိုအလျှောက်စတင်, သငျထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို turn off မှစီမံခန့်ခွဲတစ်နည်းနည်းနဲ့လျှင်, သင်အမှားကုဒ် 0xC000021A နှင့်အတူသေခြင်း၏အပြာရောင် screen ကို get: csrss.exe မဟုတ်နိုင် Remove သို့မဟုတ် disable, ရလဒ် operating system ကိုအမှားဖြစ်လိမ့်မည်။
ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိအဘယျသို့လျှင်သင်္ဘော csrss.exe Processor,
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဆိုပါကတစ်ဦးကို client-server ကိုစွမ်းဆောင်ရည်, အ Task Manager ကိုမှာကြည့်စတင်ရန်တစ် Processor ကိုတင်ပို့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာ right-click နဲ့ "ပွင့်လင်းဖိုင်တည်နေရာ 'ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ဖိုင်တွင်တည်ရှိသည် ကို C: Windows System32 ဒါလျှင်, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်ဖိုင်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်ဒီအတည်ပြုရန်နှင့် tab ကို "ပို" ကိုကြည့်ပါ - ဖိုင်ကို Microsoft Windows နဲ့ထုတ်ဝေသူကလက်မှတ်ရေးထိုးကြောင်းသတင်းအချက်အလက် - က "ကုန်ပစ္စည်းအမည်" တွင်သင်သည် "Microsoft Windows operating system" နှင့် "ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ပေါင်း" tab ကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
သည်အခြားနေရာများတွင် csrss.exe အားမရတဲ့အခါမှာဒါဟာအမှန်တကယ်ဗိုင်းရပ်စ်နိုင်ပါတယ်အဲဒီနောက်အောက်ပါကြေညာချက်ကိုကူညီနိုင်သည် CrowdInspect သုံးပြီးဗိုင်းရပ်စ်များအတွက် Windows ကိုဖြစ်စဉ်များစစ်ဆေးလုပ်နည်း။
မူရင်းဖိုင် csrss.exe, Processor ကိုအပေါ်မြင့်ဝန်လျှင်၎င်းသည်ကြောင့်ဒါဟာတာဝန်ရှိဖြစ်သောများအတွက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများချွတ်ယွင်းနေမှဖြစ်စေနိုင်သည်။ အားလုံးအများစုဟာ - ပါဝါသို့မဟုတ် hibernation နှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခု။
(Hibernate ကို Windows 10, နှင့်ယခင် OS ကိုသင့်လျော်သည်ထက်ပိုသော) သင် (ဥပမာအဘို့, ချုံ့အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်) ကို hibernation ဖိုင်နှင့်အတူအချို့သောအရေးယူလုပ်ဆောင်ပါလျှင်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အပြည့်အဝ hibernation ဖိုင်အရွယ်အစားပါဝင်သည်ကြိုးစားပါ။ သင်က Windows ကို reinstall သို့မဟုတ် "ကြီးမားသော update ကို" နောက်မှပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်လျှင်သင် (သင့်မော်ဒယ်ထုတ်လုပ်သူများထံမှအထူးသဖြင့် ACPI ယာဉ်မောင်းများနှင့် chipset ကို) ကလက်တော့အတွက်အားလုံးမူရင်းယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ် (ထိုသားဘုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ) ကွန်ပျူတာရှိသည်သေချာပါစေ။
ဒါပေမယ့်မလိုအပ်သောဤယာဉ်မောင်းအတွက်အမှု။ , ဒေါင်းလုပ် Process Explorer //technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/processexplorer.aspx program ကို run ကိုနှင့်အပြေးဖြစ်စဉ်များများ၏စာရင်းအတွက်ဝန်တောင်းဆို csrss.exe ၏ဥပမာအား double-click: အောက်ပါအဆင့်တွေကိုကြိုးစားပြီးဘာထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားမှ Processor ကို။
အဆိုပါ Threads tab ကိုဖွင့်ပါနှင့် CPU ကိုကော်လံက sort ။ Processor ကိုတနျဖိုးပေါ်တွင်ဝန်၏ထိပ်မှအာရုံစိုက်။ ကော်လံလိပ်စာ Start မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်တကွ, ဒီတန်ဖိုး (ငါ Processor ကိုမဝန်ရှိခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကို မှလွဲ. ပုံရိပ်မှာအဖြစ်အကြမ်းအားဖြင့်,) အခြို့ DLL ကိုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
(ကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို အသုံးပြု. ) ထွက်ရှာပါက DLL က, ဖြစ်နိုင်လျှင်ဤအစိတ်အပိုင်းများကို reinstall ဖို့ကြိုးစားဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့ဖြစ်၏။
ဤကိစ္စတွင်ရှိလိမ့်နိုငျသညျ, (တစ်ခါတစ်ရံ Processor ကိုအပေါ်ဝန်တစ်ဦးပျက်စီးသွားသောအသုံးပြုသူပရိုဖိုင်ကဖြစ်စေနိုင်ပါသည်တဲ့ Windows အသစ်တစ်ခုကိုအကောင့်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားပါ, (ထွက်ရရုံအသုံးပြုသူကိုပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်) လက်ရှိအသုံးပြုသူထဲက get နှင့်အသုံးပြုသူအသစ်နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေး ) အမှတ် restore စနစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါ။
(သင်ပြီးသားကောင်းတစ်ဦး antivirus ကိုရှိပင်လျှင်) ထိုကဲ့သို့သော AdwCleaner သုံးပြီးအဖြစ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပရိုဂရမ်အဘို့သင့်ကွန်ပျူတာ၏ Scan စစ်ဆေးပါ။